Wasiir Beyle: Shacabku hana aamino, cidina ma qaadan karta badda Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiir Beyle: Shacabku hana aamino, cidina ma qaadan karta badda Soomaaliya
Mareeg.com: Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, C/raxmaan Ducaale Bayle ayaa shacabka Soomaaliyeed ka codsaday iney ku kalsoonaadaan dowladda, isagoo dhanka kale xusay ineysan jirin cid qaadan karta badda Soomaaliya.
Wasiir Bayle oo wareysi siiyey VOA ayaa xusay in dowladda Soomaaliya ku dedaalieyso sidii ay u ilaalin laheyd dhamaan dhulka iyo badda Soomaaliya.
“Waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed nagu kalsoonaada, ma jirto cid qaadan karaysa biyaha iyo badda Soomaaliya, waayo wax walba way calaamadeysan yihiin,” ayuu yiri wasiirka oo haatan ku sugan Mareykanka.
Wasiirka ayaa sheegay in badaha uu yaallo xeer caalami ah oo ay sameysay Qaramada Midoobay, islamarkaana badda Soomaaliya tahay mid la yaqaano oo calaameysan.
“Badda iyo barriga Soomaaliya labaduba waxay leeyihiin calaamado cid iska qaadan karaysa ma jirto. Waxaana dhanka badda xiriir kala wadaagnaa, Jabuuti, Kenya iyo Yemen,” sidoo kale yri C/raxmaan Ducaale Beyle.
Wasiirka oo hadlkiisa sii wata “Haddii ay cid nagu sheegato hantideenna, dunida shuruuc baa kaga dagsan, waan kala hadlaynaa, waana difaacaynaa duhlka iyo badda Alle ina siiyay,”
Warka wasiirka arrimaha debadda ah ayaa u muuqda mid jawaab u ah warar dhawaanahan dad qaar fidinayeen, oo sheegeysay in Kenya markale dooneysa iney dhacdo badda Soomaaliya.
Dawo lagu tijaabinayo cudurka halista ah ee Ebola